02/20/14 ~ Myanmar Forward
မိသားစုများနှင့် အတူတစ်ကွ မကြည့်သင့်သည့် မြန်မာ SEXY ကားများ
အီစီကလီလုပ်နေကြတုန်း ဖုန်းဝင်လာပါတယ်ခဗျာ... ကောင်မလေးအဖေဖုန်းပါ။ စီးပွားရေးအကြောင်းတွေ ပြောကြတာပေါ့ခဗျာ... ဖုန်းပြန်ချလိုက်ပါတယ်ခဗျာ ...
ဆံပင်ကောက်ကောက် ပွပွလေးနဲ့အထာကျနေအောင် အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြည့်မလား
Posted by drmyochit Thursday, February 20, 2014, under ဗဟုသုတ | No comments
ဆံပင်ကို အပူချောင်းနဲ့ကောက်ထားပြီး သပ်ရပ်လွန်းနေတဲ့ ဆံပင်ပုံစံမျိုးတွေ မြင်ဖူးပါသလား။ ခုလေးမှ အပူချောင်းနဲ့ ကောက်ပြီးထွက်လာမှန်း သိသာလွန်းတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်မျိုးဟာ ဘေးနားက ကြည့်ရသူတွေအတွက် ရယ်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူငယ်ဆန်ပြီး ကောက်သားလည်းပါမယ်၊ ပွပွယောင်းယောာင်းလေးနဲ့ ပဲများထားတဲ့ အထာမျိုးမထွက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံမျိုး လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ခုပြောပြတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်း ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဆံပင်ရှည်မှ ဖြစ်မှာနော်။
၁။ပထမအဆင့်ကတော့ ရှန်ပူ နဲ့ ဆံပင်ပျော့ဆေးသုံးပြီး ခေါင်းလျှော်လိုက်ပါ။
၂။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဆံပင်ကို မုစ်လိမ်းလိုက်ပါ။ အရမ်းအများကြီး မလိမ်းမိအောင်တော့ ဂရုစိုက်ရမှာပါ။
၃။အဆင့်သုံးမှာတော့ ဆံပင်ကို ဒရိုင်ယာ၊ ဘရက်ရှပ်အလုံးကြီးကို သုံးပြီး ဆံပင်ကို အခြောက်ခံရင်း ပုံသွင်းဖို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီလို ပုံသွင်းတဲ့အခါ ဆံပင်ကို ခွဲခွဲပြီး သွင်းဖို့လိုပါတယ်။
၄။ပထမဆုံးအခြောက်ခံပုံသွင်းပြီးတဲ့ ဆက်ရှင်ကို ပုံမှာပြထားသလို လိမ်ပေးပါ။ လိမ်တဲ့အခါ အတွင်းကနေ အပြင်ဘက်ကို လိမ်တဲ့ပုံစံမျိုး လိမ်ပေးပါ။
၅။ပြီးသွားရင် လိမ်ထားတဲ့ ဆံပင်ဆက်ရှင်လေးကို ဒီအတိုင်းလေး ပြန်ချထားလိုက်ပါ။
၆။အဆင့်ခြောက်မှာတော့ ရှေ့ဆံပင်တွေကို အခြောက်ခံ၊ ပုံသွင်း၊ လိမ်ပေးပါ။ ရှေ့ဆံပင်ဆိုတာ အားလုံးထက် အရင်ဆုံးလုပ်ထားဖို့ လိုလို့ပါ။
၇။ကျန်တဲ့ ဆံပင်တွေကို ခုနကဖော်ပြထားသလို အခြောက်ခံပြီး ပုံသွင်း၊ အဲ့ဒီနောက် လိမ်ပေးရုံပါပဲ။ ပြီးရင် ပြန်ချထားလိုက်ပါ။
၈။ခေါင်းတစ်ခေါင်းလုံးက ဆံပင်တွေကို ခုနလို လုပ်ပေးနေချိန် အရင်လိမ်ထားပြီးသား ဆံပင်တွေကို ပုံပျက်မသွားပါစေနဲ့။
၉။ခေါင်းအနောက်ခြမ်းက ဆံပင်တွေကတော့ ပုံသွင်းရတာ နည်းနည်းခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ခုန မုစ်လိမ်း အခြောက်ခံထားတော့ သိပ်စိတ်ပူစရာတော့ မလိုပါဘူး။
၁၀။ခေါင်းတစ်ခေါင်းလုံး ပုံသွင်းပြီးတဲ့အခါ ပထမဆုံးလုပ်ထားတဲ့ ဆံပင်လေးတွေက နည်းနည်းတောင် ပြေချင်ချင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သဘာဝဆန်ဆန်လှနေမှာမို့ စိတ်မပူပါနဲ့။ အားလုံးပုံသွင်းပြီးတာနဲ့ ခေါင်းကို တစ်ချက်နှစ်ချက်ခါလိုက်ပြီး လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဆံပင်ကို နည်းနည်း ထိုးခွဲပေးလိုက်ပါ။ ဒါဟာ ပုံသွင်းထားမှန်း မသိသာစေဖို့ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ ကြာရှည်ခံဖို့ စပရေးနည်းနည်းဖျန်းပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့။
ဟုမ္မလင်းတွင် ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ် ဓါးပြတိုက်ခံရ
Posted by drmyochit Thursday, February 20, 2014, under မှုခင်း | No comments
ဟုမ္မလင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀။ ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဟုမ္မလင်း မြို့နယ်၊ မန်းသက်အုပ်စု၊ ဆင်နှာမောင်းကျေး ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ နေအိမ် တွင် ဓားကိုင် ဆောင်လာသည့်လူတစ်ဦးမှ အနု ကြမ်း စီး၊ ဓါးပြတိုက်ခံခဲ့ရပြီး ကျေးရွာခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူး လင်မယား ဓားဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်ဟု မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အနုကြမ်းစီးနင်းခြင်းခံရသည့် ကျေးရွာခွဲ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လင်မယားမှာ ဦးဖိုးကြည်နှင့် ဇနီး မမိကွန်း ဆိုသူတို့ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် နေအိမ်ရှိ မီးဖိုဆောင်တွင် မနက် ၅ နာရီအချိန်ခန့်က လင်းမယားနှစ်ယောက် အတူထိုင်၍ မီးလှုံနေစဉ် အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦးက နေအိမ်ပေါ်သို့ တက်ရောက်လာပြီး "ဒါ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေအိမ်လား” ဟု မေးမြန်းပြီးနောက် ပိုက်ဆံပေးရန် တောင်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး လင်းမယားက မိမိတို့တွင် ပိုက်ဆံမရှိကြောင်း ပြန်ပြောရာ အမည်မသိလူတစ်ဦးက အသင့်ယူဆောင်လာသည့် ၁၅ လက်မခန့်ရှိ ဦးချွန်ဓား တစ်ချောင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး လင်မယားအား ခုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဖြစ်စဉ်ကို ပြောပြသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှု၏ နေအိမ်အနီးတွင် နေထိုင်သည့် ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးလှဝင်း၊ ဦးစောထွေး ဆိုသူတို့နှင့် ရွာသူရွာသားများသည် "ကယ်တော်မူကျပါဦး” ဟု အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းသံကြားရသဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက် ၀ိုင်းဝန်းခဲ့ရာတွင် အနုကြမ်းဝင်ရောက်စီးနင်းသူမှာ နမ့်ထိပ် ကွန်းချောင်းဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့နောက် ရွာသားများက လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ဖမ်းဆီးခဲ့ရသည်ဟု ဆင်နှာမောင်း ကျေးရွာသားတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
“အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းသံကြားရလို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး မျက်နှာပြင်မှာ သွေးတွေစီးကျနေတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်...” ဟု အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်သူ ဦးစိုးဝင်းက ပြောသည်။
ဓါးဖြင့် ခုတ်ခံရခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖိုးကြည်တွင် ၀ဲဘက်မျက်လုံးဘေးပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ ၀ဲဘက်မေးရိုးအပေါ် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ နှာခေါင်းဝဲဘက် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ ၀ဲဘက်မျက်လုံး ဖုယောင်ညိုမဲ ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး၊ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ၀ဲဘက်တတောင်ဆစ် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ ၀ဲဘက်လက်ခလယ်၊ လက်သန်းကြွယ် ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ၊ ၀ဲဘက်မျက်ခုံး ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ပါးပြင်နှစ်ဘက် ပြတ်ရှဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။
ရရှိထားသော ပြတ်ရှဓား ဒဏ်ရာများသည် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မရှိကြောင်း ဟုမ္မလင်းပြည်သူ့ဆေးရုံရှိ မှုခင်းဆေးပညာ ဆရာဝန်ကြီးက ခန့်မှန်းပြောဆိုထားသည်။
အနုကြမ်းဝင်ရောက်စီးနင်းသူကို ဒေသခံရွာသားများက ဟုမ္မလင်းမြို့မ ရဲစခန်းတွင် ရွာသားများက အပ်နှံခဲ့ကြသည်။ ရဲဌာန၏ ပြောကြားချက်များအရ အနုကြမ်းဝင်ရောက်စီးနင်းသူမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မော်လိုက်ခရိုင်၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ ရွှေထီးကုန်းကျေးရွာနေ ကိုစောမင်းထွေ(ခ) ဖိုးတုတ် ဆိုသူဖြစ်သည်ဟု အတည်ပြုထားသည်။
ဗင်နီဇွဲလား ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခမှာ အလှမယ် တစ်ဦး ကွယ်လွန်
Posted by drmyochit Thursday, February 20, 2014, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တောင်အမေရိက က ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာ အစိုးရ ထောက်ခံသူနဲ့ အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတို့ကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှု အကြီးအကျယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၃ မတ်လက သမ္မတ Hugo Chavez ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဒုတိယ သမ္မတ Nicolas Maduro က သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။
မဲကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြည်သူများ မကျေနပ်ချက် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ယခု အရေးအခင်းကတော့ ၁၅ နှစ်ကြာ သက်တမ်းရှည်လာတဲ့ ဆိုရှယ် လစ် နိုင်ငံရေး စနစ်အပေါ် ပုန်ကန်တော်လှန်ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ရေနံဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၃ နှစ် လယ်လောက် က စလို့ ယနေ့အချိန်အထိ နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်တော့ ပါဘူး။
အရေးအခင်းများကြောင့် သေဆုံးသူများလည်း မြင့်တက် လာပါယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လကပဲ ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ အလှမယ် တစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသားတို့ လမ်းမမှာ လုပ်ကြံ ခံခဲ့ ရပါတယ်။ ယခု ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ ပြည်နယ် တစ်ခုမှာ Miss Tourism ဆု ရရှိထားတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Genesis Carmona ဟာလည်း လမ်းမပေါ် မှာ အရေးအခင်းထဲ သေနတ်နဲ့ အပစ်သတ် ခံခဲ့ ရပါတယ်။ ဦးခေါင်းကို ထိသွားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ် ယခုလို တင်ပြီး ဆေးရုံပို့ပေ မယ့် ကုသလို့ မရပဲ သေဆုံး သွား ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဗင်နီဇွဲလားဟာ ပဋိပက္ခများကြောင့် အသက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာကြောင်း သိရ ပါတယ်။
Desperate dash to save dying beauty queen: Venezuelan woman, 22, dies hours after being gunned down on the street
Génesis Carmona shot in the head amid anti-government protests
Unidentified gunman opened fire on demonstrators in Valencia
Venezuelan protest death toll reaches five inaweek
By Donna Sawyer
PUBLISHED: 17:59 EST, 19 February 2014 | UPDATED: 04:48 EST, 20 February 2014
Slipping away by the second, she lies cradled in the arms of the motorbike rider who facesadesperate – and ultimately futile – race against time to save her life.
Moments earlier, Genesis Carmona had been an ordinary 22-year-old woman onastreet in the Venezuelan city of Valencia.
Then she was shot in the head by an unidentified gunman who opened fire at anti-government protesters.
Miss Carmona,amarketing student and beauty queen, slumped to the ground. A bystander scooped her up in his arms and put her on his motorbike.
But despite rushing her to hospital for emergency surgery, doctors were unable to save her life.
Last night Miss Carmona’s family were in shock.
‘How long are we going to live like this? How long do we have to tolerate this pressure, with them killing us?’arelative said. ‘She only needed one more semester to graduate,’ he added.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2562670/Venezuela-awaits-fate-jailed-opposition-leader.html#ixzz2tslJr4G6
တမူးတွင် ဈေးလာရောင်းသည့် ပန်ချာပီနှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်ကို အိန္ဒိဘက်မှပိတ်
Posted by drmyochit Thursday, February 20, 2014, under သတင်းများ | No comments
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ် တမူးမြို့တွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့သော ပန်ချာပီနှစ်ဦးကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဂိတ်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက် နံနက်မှစ၍ ပိတ်လိုက်ကြောင်း တမူးမြို့ခံများ နှင့် တမူးမြို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
““မြန်မာဘက်ကတော့ မပိတ်ပါဘူး။ သူတို့ဘက်က ပိတ်လိုက်တာပါ။ ပန်ချာပီနှစ်ဦးပျောက်သွားတာနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်”” ဟု တမူးမြို့နယ် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် နံနက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ပန်ချာပီခြောက်ဦး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်လာပြီး နှစ်ဦးချင်းစီ လူခွဲကာ တမူးမြို့ပေါ်တွင် ဈေးရောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပန်ချာပီလေးဦးမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော်လည်း နှစ်ဦးမှာ ပြန်ရောက်မလာသဖြင့် တမူးမြို့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များမှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
““ရှာမတွေ့တာတော့ ကိုးရက်လောက်ရှိပြီ။ လူက ရှာမတွေ့တော့ အိန္ဒိယဘက်က လူငယ်ကွန်ရက်က မြန်မာပြည်က လူငယ်ကွန်ရက်ကို လှမ်းချိတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ရှာပေးနေတယ်”” ဟု တမူးမြို့နယ် လူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့မှ ကိုယဉ်ကိုဦးက ပြောသည်။
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှတစ်ဆင့် ၀င်ရောက်လာသူ မည်သူမဆို တရားဝင် ညအိပ်၊ ညနေ နေခွင့်မရသော်လည်း နားလည်မှုဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးများမှတစ်ဆင့် မနက်ခြောက်နာရီမှ ညနေခြောက်နာရီအထိ နေထိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။
တမူးမြို့နယ်စပ် လ.၀.က ဂိတ်မှတစ်ဆင့် တစ်ရက်တာလည်ပတ်ခွင့်ဖြင့် ရောက်ရှိလာသူ ခြောက်ဦးအနက် ပျောက်ဆုံးနေသူ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ပန်ချာပီနှစ်ဦးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ယနေ့ အချိန်ထိ မတွေ့ရှိရသေးကြောင်း နယ်စပ်ဂိတ် လ.၀.ကဂိတ်တွင် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက အဆိုပါကိစ္စကြောင့် နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ဟု နယ်စပ်ကုန်သည်အချို့ကို ပြောကြားခဲ့သည်ဟု နယ်ခံကုန်သည်အချို့က ပြောသည်။
အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးမြို့တစ်နေရာကိုတွေ့ရစဉ် ဓာတ်ပုံ - ကိုစိုင်း
ဆံပင်ကောက်ကောက် ပွပွလေးနဲ့အထာကျနေအောင် အိမ်မှာ ကို...
ဟုမ္မလင်းတွင် ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ် ဓါးပြတို...
ဗင်နီဇွဲလား ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခမှာ အလှမယ် တစ်ဦး ကွယ်...
တမူးတွင် ဈေးလာရောင်းသည့် ပန်ချာပီနှစ်ဦး ပျောက်ဆံ...
ဖာပွန်ဒေသ ပဋိပက္ခ ကေအဲန်ယူနှင့် စစ်တပ် အပြန်အလှန် စွပ်စွဲ၊ ကန့်ကွက်စာများ ပေးပို့ - ဧပြီလ ၇ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်။ ကေအိုင်စီ ကရင်ပြည်နယ်၊ မူတရော်(ဖာပွန်)ဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် (NCA)ပါ အချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း KNLA ...